မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲ မတိုင်ခင် နည်းဗျူဟာပိုင်း ချဉ်းကပ်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၂)
10 Nov 2018 . 7:07 PM
မန်ချက်စတာဒါဘီဆိုတာလည်း မထင်မှတ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အမြဲတမ်း မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်လို့ အခုပွဲမှာရော ဘာတွေ ဖြစ်လာဦးမလဲ။ မန်ယူအသင်းရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို အပိုင်း(၁)အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အခု မန်စီးတီးအသင်း နည်းဗျူဟာတွေကို သုံးသပ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် . . .
ရပ်တန့်လို့ မရဖြစ်နေတဲ့ မန်စီးတီး
ဒီရာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဆုဖလားအားလုံးကို စိန်ခေါ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့အနေအထားပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၁၁)ပွဲကစား (၃၃)ဂိုးအထိသွင်းယူထားတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်(၅)ခုမှာ PSG (၄၁)ဂိုးပြီးရင် သွင်းဂိုးအများဆုံးအသင်းဖြစ်နေတယ်။ ဒီရာသီမှာလည်း သွင်းဂိုး(၁၀၀)မှတ်တမ်းကို ထပ်ချိုးဦးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက သူတို့ရဲ့ ခံစစ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ မှတ်တမ်းပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၄)ဂိုးသာ ပေးခဲ့ရပြီး ဒါဟာ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်(၅)ခုမှာ ပေးဂိုးအနည်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။
နည်းဗျူဟာပိုင်းအရ ပြောရရင် ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ဘာတွေ တွေးနေလဲဆိုတာ ကြိုမသိနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ တခြားနည်းပြတွေ မလုပ်ရဲတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆုံးဖြတ်တတ်တာက ဂွါဒိယိုလာရဲ့ အားသာချက်လို့ ပြောရမယ်။ ဒီရာသီမှာ ဂွါဒီယိုလာက (၄-၃-၃)ကစားကွက်ကိုပဲ Base တည်ထားပြီး Full Backs တွေက Wing Backs ပုံစံ ကစားလေ့ရှိပြီး Wingers တွေက တစ်ဖက်အသင်း ပယ်နယ်တီဧရိယာထဲမှာ နေရာယူထားတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ တောင်ပံကနေ တစ်ဖက်အသင်း ပယ်နယ်တီဧရိယာထဲ တိုးဝင်ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မာရက်ဇ် Riyad Mahrez ကို ဆာနေး Leroy Sane ထက် ပို နေရာပေးနေတာလို့ ယူဆရမှာပါ။
Defensive Midfielder ရဲ့ အဓိက တာဝန်က Central Defenders (၂)ဦးကို ကူဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကွင်းဘက်ခြမ်းမှာ တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ဟန့်တားနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ နည်းဗျူဟာမှာ Left Back ဖြစ်တဲ့ မန်ဒီ Benjamin Mendy နဲ့ ညာနောက်ခံလူ ဝေါလ်ကာ Walker တို့က အဓိက ဖြစ်လာတယ်။ ဘာစီလိုနာမှာတုန်းက ဒန်နီအဲလ်ဗတ်စ် Dani Alves နဲ့ အဘီဒယ်လ် Abidal တို့လိုပါပဲ။
မန်ဒီနဲ့ ဝေါလ်ကာတို့ဟာ မိနစ်(၉၀)လုံး ရှေ့တက်နောက်ဆင်း ကစားနိုင်တဲ့အပြင် Danger Cross တွေကြောင့် တိုက်စစ်က ပိုကြောက်ဖို့ ကောင်းလာတယ်။ အခု မန်စီးတီးကို မြင်နေရတာက အရင် ဂွါဒီယိုလာလက်ထက်က ဘာစီလိုနာကို မြင်နေရသလိုပဲ။ ကွင်းလယ်နဲ့ ရှေ့တန်းမှာ ဖာနန်ဒင်ဟို Fernandinho တစ်ဦးကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ (၅)ဦးက တိုက်စစ် အားသန်တဲ့သူတွေဖြစ်သလို Full Backs တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် မန်စီးတီး တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အခါ တိုက်စစ်မှာ ကစားသမား (၇)ဦးလောက်အထိ ရှိနေတာကြောင့် ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲပါတယ်။ မန်စီးတီး တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အခါ လှိုင်းလုံးကြီးတွေလိုပဲ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တက်လာတာကြောင့် ပြိုင်ဘက်ခံစစ်က ဘာမှကို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။
အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်က အကောင်းဆုံး ခံစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးက တိုက်စစ်ပြီး တိုက်စစ် ကစားနေတာကြောင့် ပြိုင်ဘက်အသင်းအတော်များများက ခံစစ်မှာပဲ အချိန်ကုန်တာ များခဲ့တယ်။ မန်စီးတီးကွင်းလယ်နဲ့ တောင်ပံတွေကို မချိတ်ဆက်နိုင်အောင် ဟန့်တားပြီး Counter Attacking Play ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ အခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်။ မော်ရင်ဟို Mourinho အနေနဲ့လည်း ဒီအချက်ကို သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီရာသီအစတုန်းက မန်စီးတီးကို သရေကစားခဲ့တဲ့ ၀ုလ်ဗ်အသင်းရဲ့ နည်းဗျူဟာကိုပဲကြည့်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ကိုယ့်အိမ်ကွင်းမှာ အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ မော်ရင်ဟိုကို ဂွါဒီယိုလာ အနိုင်ရဖို့ ပြင်ဆင်လာမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင် . .
Photo:Irish Mirror,Manchester Evening News,Getty Images,premierleague,Evening Standard
မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲ မတိုငျခငျ နညျးဗြူဟာပိုငျး ခဉျြးကပျကွညျ့ခွငျး အပိုငျး(၂)
မနျခကျြစတာဒါဘီဆိုတာလညျး မထငျမှတျတဲ့ အပွောငျးအလဲတှကေို အမွဲတမျး မွငျတှနေ့ရေတာဖွဈလို့ အခုပှဲမှာရော ဘာတှေ ဖွဈလာဦးမလဲ။ မနျယူအသငျးရဲ့ နညျးဗြူဟာတှကေို အပိုငျး(၁)အဖွဈ ဖျောပွခဲ့ပွီး အခု မနျစီးတီးအသငျး နညျးဗြူဟာတှကေို သုံးသပျဖျောပွလိုကျရပါတယျ . . .
ရပျတနျ့လို့ မရဖွဈနတေဲ့ မနျစီးတီး
ဒီရာသီမှာ မနျစီးတီးအသငျးဟာ ဆုဖလားအားလုံးကို စိနျချေါဖို့ အသငျ့ရှိနတေဲ့အနအေထားပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၁၁)ပှဲကစား (၃၃)ဂိုးအထိသှငျးယူထားတဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ ဥရောပထိပျသီးလိဂျ(၅)ခုမှာ PSG (၄၁)ဂိုးပွီးရငျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအသငျးဖွဈနတေယျ။ ဒီရာသီမှာလညျး သှငျးဂိုး(၁၀၀)မှတျတမျးကို ထပျခြိုးဦးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက သူတို့ရဲ့ ခံစဈစှမျးဆောငျရညျနဲ့ မှတျတမျးပါ။ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၄)ဂိုးသာ ပေးခဲ့ရပွီး ဒါဟာ ဥရောပထိပျသီးလိဂျ(၅)ခုမှာ ပေးဂိုးအနညျးဆုံးဖွဈနတေယျ။
နညျးဗြူဟာပိုငျးအရ ပွောရရငျ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ရဲ့ ခေါငျးထဲမှာ ဘာတှေ တှေးနလေဲဆိုတာ ကွိုမသိနိုငျလောကျအောငျပါပဲ။ တခွားနညျးပွတှေ မလုပျရဲတဲ့အပိုငျးတှမှော ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆုံးဖွတျတတျတာက ဂှါဒိယိုလာရဲ့ အားသာခကျြလို့ ပွောရမယျ။ ဒီရာသီမှာ ဂှါဒီယိုလာက (၄-၃-၃)ကစားကှကျကိုပဲ Base တညျထားပွီး Full Backs တှကေ Wing Backs ပုံစံ ကစားလရှေိ့ပွီး Wingers တှကေ တဈဖကျအသငျး ပယျနယျတီဧရိယာထဲမှာ နရောယူထားတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ပဲ တောငျပံကနေ တဈဖကျအသငျး ပယျနယျတီဧရိယာထဲ တိုးဝငျထိုးဖောကျနိုငျစှမျးရှိတဲ့ မာရကျဇျ Riyad Mahrez ကို ဆာနေး Leroy Sane ထကျ ပို နရောပေးနတောလို့ ယူဆရမှာပါ။
Defensive Midfielder ရဲ့ အဓိက တာဝနျက Central Defenders (၂)ဦးကို ကူဖို့နဲ့ ကိုယျ့ကှငျးဘကျခွမျးမှာ တဈဖကျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကို ဟနျ့တားနိုငျဖို့ပါပဲ။ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ နညျးဗြူဟာမှာ Left Back ဖွဈတဲ့ မနျဒီ Benjamin Mendy နဲ့ ညာနောကျခံလူ ဝေါလျကာ Walker တို့က အဓိက ဖွဈလာတယျ။ ဘာစီလိုနာမှာတုနျးက ဒနျနီအဲလျဗတျဈ Dani Alves နဲ့ အဘီဒယျလျ Abidal တို့လိုပါပဲ။
မနျဒီနဲ့ ဝေါလျကာတို့ဟာ မိနဈ(၉၀)လုံး ရှတေ့ကျနောကျဆငျး ကစားနိုငျတဲ့အပွငျ Danger Cross တှကွေောငျ့ တိုကျစဈက ပိုကွောကျဖို့ ကောငျးလာတယျ။ အခု မနျစီးတီးကို မွငျနရေတာက အရငျ ဂှါဒီယိုလာလကျထကျက ဘာစီလိုနာကို မွငျနရေသလိုပဲ။ ကှငျးလယျနဲ့ ရှတေ့နျးမှာ ဖာနနျဒငျဟို Fernandinho တဈဦးကလှဲပွီး ကနျြတဲ့ (၅)ဦးက တိုကျစဈ အားသနျတဲ့သူတှဖွေဈသလို Full Backs တှနေဲ့ ပေါငျးစပျလိုကျရငျ မနျစီးတီး တိုကျစဈဆငျတဲ့အခါ တိုကျစဈမှာ ကစားသမား (၇)ဦးလောကျအထိ ရှိနတောကွောငျ့ ထိနျးခြုပျရခကျခဲပါတယျ။ မနျစီးတီး တိုကျစဈဆငျတဲ့အခါ လှိုငျးလုံးကွီးတှလေိုပဲ တဈဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့ တကျလာတာကွောငျ့ ပွိုငျဘကျခံစဈက ဘာမှကို မလုပျနိုငျတော့ဘူး။
အကောငျးဆုံးတိုကျစဈက အကောငျးဆုံး ခံစဈဖွဈတယျဆိုတဲ့ စကားအတိုငျးပဲ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီးက တိုကျစဈပွီး တိုကျစဈ ကစားနတောကွောငျ့ ပွိုငျဘကျအသငျးအတျောမြားမြားက ခံစဈမှာပဲ အခြိနျကုနျတာ မြားခဲ့တယျ။ မနျစီးတီးကှငျးလယျနဲ့ တောငျပံတှကေို မခြိတျဆကျနိုငျအောငျ ဟနျ့တားပွီး Counter Attacking Play ကို ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ကစားမယျဆိုရငျတော့ အခွအေနကေောငျးနိုငျတယျ။ မျောရငျဟို Mourinho အနနေဲ့လညျး ဒီအခကျြကို သဘောပေါကျပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒီရာသီအစတုနျးက မနျစီးတီးကို သရကေစားခဲ့တဲ့ ဝုလျဗျအသငျးရဲ့ နညျးဗြူဟာကိုပဲကွညျ့ပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ကိုယျ့အိမျကှငျးမှာ အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ မျောရငျဟိုကို ဂှါဒီယိုလာ အနိုငျရဖို့ ပွငျဆငျလာမှာဖွဈပွီး ဘယျလိုရလဒျထှကျပျေါလာမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ . .